ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်တစ်ဦးခွေးနှင့်အတူaGirl ချိန်းတွေ့သင့်အဘယ်ကြောင့်
အားဖြင့် Sebastian Harris က
သင်တစ်ဦးခွေးနှင့်အတူaGirl ချိန်းတွေ့သင့်အဘယ်ကြောင့်
ယခုအချိန်တွင်ငါအံ့သြဖွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်ဖြစ်ကြောင်းကို. သူမသည်လှပပါတယ်, အသိဉာဏ်နှင့်ဣတ္. သူမသည်အစဉ်အမြဲငါကိုမေးနိုင်သမျှသည်. တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကြှနျုပျ annoys သောတစ်ခုတည်းသောအရာကအမြဲမနာလိုဝန်တိုရရန်စတင်သူမ၏ခွေးကလေးသည်, သူ့ကိုငါနမ်းပါသို့မဟုတ်ပုခက်လွှဲသည့်အခါတိုင်း.
ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ, ကိုယ့်ခွေးလိုငါသည်လည်းငါ့မိဘ၏နေရာတွင်အသက်ရှင်သောခွေးရှိသည်သော်လည်းငါအခုထိကျွန်မသူ့ကိုခွေးဟောင်နေတဲ့ tinnitus စွန်မပါဘဲသူမ၏မနမ်းဘူးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရ. ကိုယ့်ကိုပင်အနည်းငယ်အရာအားမုန်းရန်စတင်, ငါသည်ထိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာရှိသောဆက်ဆံရေး၏အဓိကသော့ချက်ဖြစ်အံ့သောငှါသဘောပေါက်သည်အထိ.
ကိုယ်ကလုံးဝအသံအရူးသိပေမယ့်ပိုပြီးငါစရိုက်များနှင့်ငါ့ရည်းစားရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစား, သာ. ငါသည်လည်းသူ့ခွေးကိုကျွန်မထင်ထားတာထက်သူမအများကြီးပိုပြီးသြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့အံ့သောငှါသဘောပေါက်.
ငါသည်အပင်သူမ၏အခြားဖြစ်လျက်ရှိ၏စောင့်ရှောက်မှုယူခွင့်ပြုတဲ့လမ်းမှာကြီးပြင်းခဲ့ကြမည်မဟုတ်ပေလျှင်, ငါ့ရည်းစားဖြစ်လိုဘယ်လိုစိတ်ကူး. ငါသည်လည်းသူ့ခွေးကိုဟောင်ကိုရပ်တန့်မထားဘူးအခါနေဆဲငါ့ကိုအ annoys သော်လည်းကြောင်းနိဂုံးဆီသို့ရောက် လာ. ,, ငါသူ့ကိုဖြစ်လာမှကူညီပေးခဲ့သစုံလင်သောလူသားအဘို့သူ့ကိုကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ရှိသည်. ငါနောက်ဆုံးမှာသဘောပေါက် မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲကျ ခွေးအစဉ်အမြဲငါဖန်ဆင်းတော်မူပြီနိုင်ခဲ့တာအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်သူခဲ့ခဲ့သည်.
သူမသည်တာဝန်ယူမှုကျော် ယူ. သင်ယူခဲ့
တစ်ခါတစ်ရံမှာကျနော်ကလေးများယခုအချိန်တွင်၎င်းတို့၏မိဘများမြှင့်သောခံစားချက်ရှိသည်, အစားအ၎င်းတို့၏မိဘများကကြီးပြင်းလာဆောင်မှာ၏. ထိုရလဒ်အတိုင်းသူတို့တာဝန်တစ်ခုသဘောမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းမရကြဘူး, ဘယ်သူမှအရာတစ်ခုခုသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်တာဝန်ဖြစ်ဆိုလိုတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုသွန်သင်သောကြောင့်.
သင်ချိန်းတွေ့နေသောမိန်းကလေးတစ်ဦး၏တာဝန်လုံးဝသဘောရှိတယ်သောသင်တို့၌အထဲကရှာတွေ့ပါ, သူမဖြစ်ကောင်းတဲ့ခွေးကိုခဲ့ဘယ်တော့မှမ. ခွေးနှင့်အတူတက်ကြီးထွားလာသောသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အလိုအလျှောက်အခြားဖြစ်လျက်ရှိများအတွက်တာဝန်ရှိကျော်ယူစိတ်ဓါတ်တွေရလာစေတယ်.
သူမသည်သူနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ဖို့ရှိပါတယ်, သူမသူ့ကိုအစာကျွေးဖို့ရှိပြီးသူသည်အနာရောဂါစွဲသောအခါတိရိစ္ဆာန်ဆရာမှကိုယ်တော်ကိုဘမ်းဆီးစေခြင်းငှါရှိပါတယ်. သူအပေါင်းအမှုအရာတာဝန်ရှိတစ်သဘောမျိုးလိုအပ်. သင်သည်အခြားဖြစ်လျက်ရှိ၏တာဝန်ဤသဘောမျိုးရှိပါတယ်သူတစ်ဦးကမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့ကြသောအခါ, သင်သည်လည်းလူသားသတ္တဝါတွေကိုကြွလာသောအခါတာဝန်သူမ၏အသိပင်ပိုကြီးကြောင်းတော်တော်လေးနြို.
သင်ဆက်ဆံရေးကိုအမျိုးသားများပျော်ရွှင်စေသည်အရေအတွက်တစ်ချက်သိလား,? မလုပ်ပါနှင့်, ကျွန်တော်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးထွက်ရရန်မျှော်လင့်အရေအတွက်တစ်ချက်လိင်နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ဘာကိုလိုချင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်သောသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. အမျိုးသားများဂရုစိုက်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသည်သောမိန်းမတို့ချင်တယ်.
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံရေး၌ရှင်ဘုရင်တို့ကိုတူဆက်ဆံစေလိုကြောင်း misbelief နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်. ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည်နှင့်အတူဖြစ်ကြ၏မိန်းကလေးတစ်ကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်ကြောင်းခံစားဖို့ဖြစ်တယ်. မည်သည့်အခြားမိန်းကလေးတစ်ဦးထက်သင်ဂရုစိုက်ဖို့ပိုဆန္ဒရှိသူသည်မိန်းကလေးတစ်ဦး၏တစ်ဦးအမျိုးအစားရှိလျှင်, ထို့နောက်တစ်ဦးကိုခွေးရှိသူတစ်ဦးကမိန်းကလေးဖြစ်တယ်.
ခွေးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးယူခြင်းအချိန်နှင့်သည်းခံခြင်းတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်. ငါခွေးကိုခဲ့သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးဘူးနဲ့သူတစ်ဦးဂရုစိုက်တတ်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးခဲ့မမူ. သင်လိုချင်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အဆုံးသတ်ဘယ်သူမိန်းကလေးအခြားသတ္တဝါ၏စောင့်ရှောက်မှုယူကြောင်းသေချာပါစေ, သင်အပါအဝင်.
ကျမကအားကစား ပတ်သက်. အလွန်စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ကြောင်းကို. ငါသည်အရွရွပြေးသွားရန်နှင့်လတ်ဆတ်သောလေထုမှာဖြစ်ကိုချစ်. မှုကြောင့်ငါ့မှာဗီတာမင် D ကိုအဆင့်နိမ့်နိမ့်နဲ့ထပြီးစဉ်ကိုငါရုပ်မြင်သံကြားများ၏ရှေ့မှောက်၌တနေ့လုံးဖြုန်းစိတ်ဝင်စားမဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုတဲ့အချက်ကိုမှ, ငါသည်လည်းတစ်ဦး၏အိပ်ရာအာလူးနှင့်ချိန်းတွေ့စိတ်ဝင်စားမဟုတ်.
သင်ချိန်းတွေ့နေသောမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုခွေးရှိတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သူမမှတပါးတစုံတခုကိုမျှပျင်းရိ၏အိပ်ရာအာလူးကြောင်းအတော်လေးနြို. သင်တို့ရှိသမျှသည်ကြမ်းပြင်ကျော်ခွေးကို poop ရှိသည်ချင်ကြပါဘူးဆိုရင်, သင်အနည်းဆုံးသင့်ရဲ့ခွေးကိုနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ကျင်လည်ရမည်.
ငါကိုခွေးရှိသူတစ်ဦးကမိန်းကလေးမဟုတ်ဘဲလှုပ်ရှားတက်ကြွလျှက်ပြင်ပသူမ၏အချိန်သာသုံးစွဲသည်ကိုသင်တို့သည်အလိုအလျောက်အာမခံချက်, အစားအိပ်ရာပေါ်မှာမိမိအချိန်ကိုဖြုန်း၏. သူဟောင်ကိုရပ်တန့်မထားဘူးသောအခါငါငါ့ရ​​ည်းစားရဲ့ခွေးအားဖြင့်မကောင်းပါ၏တောင်မှ, ငါတို့သည်သူ့ကိုနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ယူသောအခါငါကပျော်မွေ့.
အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ Perfect Man ၌အဘယ်အရာကို Want ပါနဲ့?
12 မစ္စစ်သည် Haves ဖြစ်ရမည်. မှန်သော